5 Of The Best Shopping outlets Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Of The Best Shopping outlets Na Europe
Mgbe ejegharị ejegharị ná mba ọzọ, anyị niile n'anya ohere ịga shopping! Ọ na-adị iche iche ná mba ọzọ, ọ bụ na ọ? Mgbe ọ na-abịa Europe, shopping anaghị tụkwasịrị. Ọ bụghị nanị na o nwere ma ama shopping obodo ndị dị otú ahụ dị ka London na Milan, ya ọbụna nwere ọtụtụ tinyekwa malls àjà nnukwu ego na elu n'okporo ámá na-elu-ọgwụgwụ okomoko ụdị. N'okpuru ebe anyị zuru ezu 5 Of The Best Shopping outlets Na Europe.
ladies, i nwere ike iji na-a bit kwenye ka kwenye gị nwoke so na-eri, ma na nkwa nke mmebe kpọọ na belata ahịa, o kwesịrị nnọọ mgbalị. Ma ọ bụrụ na hubby ma ọ bụ enyi nwoke na-adịghị ike, na tinyekwa obodo nta bụ n'ụlọ ọtụtụ kọfị ụlọ ahịa ebe ha nwere ike ịnọ na-ekiri ndị mara mma ndị mmadụ ebe ị na ịzụ ahịa ruo mgbe i idebe!
Barberino Designer tinyekwa, Italy
The tinyekwa emi odude 30 km si Florence na pụrụ ruru mfe ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ala na ihe dị ka ọkara otu awa. The Barberino Designer tinyekwa bụ a shopping obodo: dị na a suburban ebe, ya anya ka a obere obodo na ọtụtụ “ụlọ” nade na-ebi na ụlọ ahịa. N'etiti uru nke onye tinyekwa ka Barberino Designer tinyekwa bụ doro anya na elu ịta nke na-echekwa nke isi ụdị na a mmachi ebe.
Ị ga-ahụ Italian na mba a ma ama ụdị ndị dị otú ahụ dị ka Prada, Dolce & Gabbana, Cavalli, Patrizia pepe, Michael Kors, Pinko, Furla, mana ọtụtụ ndị mba ụwa dịka Amụma, Ejima Set, mkpumkpu, Hugo onyeisi, Nike, na Adidas, ịza aha ole na ole n'etiti ndị a kacha mara amara. Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu fuo na-atụfu ọkacha mmasị gị ika, na-eje ije n'ime etiti nke nnukwu ụlọ ahịa ị ga-ahụ a free, zuru ezu map nke tinyekwa.
Gịnị mere anyị na-ekpebi tinye a ka anyị Best Shopping outlets na Europe? The na-echekwa na-ekwe nkwa discounts of 30 ka 70% tụnyere ndị n'ire price na nkịtị ụlọ ahịa na mgbe e nwere ihe pụrụ iche n'ọkwá! Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-na nnukwu ụdị, nnọọ na ị na-agba ọsọ ahụ n'ihe ize ndụ nke na-achọta ụfọdụ oké amụọ, na-ejide uwe ahụ ma ọ bụ akpa, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ahụ ị hụrụ na ọnụ ahịa dị elu n'ụlọ ahịa obodo ahụ.
Bicester Village nwere ihe niile na ị na-achọ mgbe ọ na-abịa ego mmebe shopping. Anyị kwukwara Bicester anyị Best Shopping outlets na Europe ndepụta dị ka ọ bụ otu n'ime n'elu okomoko retail ebe na UK. Ọ bụ n'etiti ndị kasị ewu ewu njem nleta ebe na England maka mba ọzọ, tinyere Buckingham Obí na Tower nke London.
Ọ bụghị nanị maka njem nleta, ezie. Fashion editọ na ndi oru nta akuko na-ọbịa mgbe nile na otú bụ Kate Middleton, Duchess nke Cambridge. Ọ nọ na ozugbo ahụrụ ịzụ pajamas maka Prince George. Ma unu bụ ndị a ka eze ma ọ bụ a-ewu ewu nchịkọta akụkọ, onye na-adịghị amasị a bargain?
Chọpụta a pụrụ iche ịzụ ahịa ahụmahụ na-emeghe-air ọnọdụ na La Vallee Village nso Paris. E nwere ihe karịrị 110 boutiques nke ụwa a ma ama na mba ejiji. E nwekwara ndụ ụdị àjà mbụ ha oge collection na belata ahịa, nile n'afọ.
La Vallee Village bụ otu n'ime Best Shopping outlets na Europe. Ọ bụ ebe obibi prestigious ụdị na awade a nhọrọ nke ọma curated ọrụ iji hụ na ndị ọbịa na-enwe agaghị echefu ụbọchị.
The Village bụ n'ụlọ ihe kariri 110 boutiques nke prestigious ụdị gụnyere: Armani, Calvin Klein, Carven, Charles Tyrwhitt, Kra Carolina Herrera, Coach, Diane von Furstenberg, Fred Perry, Furla, Amụma, Hackett, Jimmy Choo, Kenzo, Longchamp, Marni, Michael Kors, Moncler, Paul & Joe, Paul Smith, Poiray, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, S.T. Dupont, Sandro, Superdry, Ted Baker, Tods, Tommy Hilfiger, The Kooples, Tumi, ugg, Vanessa Bruno, Yves Salomon, Zadig & Voltaire na ọtụtụ nke na anyị enweghị ike ịkpọ ha niile.
Serravalle Designer tinyekwa, Serravalle nso Milan, Italy
A ndepụta nke Best Shopping outlets na Europe nwere ike ahapụ Milan! Ọ bụrụ na ị na-achọ elu ọgwụgwụ shopping, Milan na-abụkarị n'elu ọtụtụ ndepụta ndị mmadụ. Ị maara na ị nwere ike nweta bargains gị ewere shopping kwa? Gaa Leta Serravalle Designer tinyekwa maka ego na nnukwu na elu uzo ejiji na ụdị.
Emi odude ke esịt nke Gavi ugwu nta. Ọ na-ejikọrọ na a kwa ụbọchị ụgbọ ala mgbagharị ọrụ si Milan (njem oge ruru. 50 nkeji). Serravalle Designer tinyekwa bụ ọpụpụ kachasị na Europe raara nye ụwa okomoko shopping. Inside, na mgbakwunye na 11 ebe nke uto. ọ na-agụnye cafes na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ịzụ ahịa na ndị hụrụ ga-ahụ karịrị 230 echekwa. All juputa na kacha mma mba ụdị, plus nnukwu aha Italian mmebe kpọọ tinyere Casadei, aisbeg, na Missoni.
Enwe a nleta Wurzburg, otu n'ime ndị kasị ochie German obodo a UNESCO World Heritage saịtị. Explore ya akụkọ ihe mere eme na saịtị na ncheta mgbe enwetaghị ihe kasị mma bargains na Wertheim Village tinyekwa shopping distrikti. Nke a tinyekwa shopping obodo Wurzburg obụrede mbụre a nnukwu 110 obodo na mba ụdị! Obodo bụ dị nnọọ 50 nkeji si Frankfurt ma ọ bụ 60 Nkeji si Nuremberg. E nwekwara ọtụtụ eateries na-ị ịkpatawo gị shopping!
Nweta elu àgwà European mmebe ejiji, oche, ma ọ bụ ngwa ụlọ maka 30% ka 60% Mpekarị. The ụbọchị nke na-emepụta ọkụ n'ọtụtụ ihe ha nwere na n'oge a kara aka rifọrọ erifọ na-ogologo arahụ. Factory tinyekwa echekwa na-now na-tọgbọrọ aghara aghara n'etiti ndị ọmarịcha obere ka ọkara sized obodo. Nakwa dị ka gburugburu obodo mmepere emmepe na, niile ị maara, ma eleghị anya, kpọmkwem n'ụlọ! Mkpị na pọọsụ ọ bụla?
Frankfurt ka Wurzburg Ụgbọ oloko
Nuremberg na Wurzburg Ụgbọ oloko
Stuttgart na Wurzburg Ụgbọ oloko
Bonn na Wurzburg Ụgbọ oloko
Njikere iji nweta gị na-awụlikwa elu on a ụgbọ okporo ígwè maka shopping njem nke a ndụ? Trust Save A Train ka i a tiketi e ngwa ngwa na enweghị ihe ọ bụla zoro ezo ụgwọ. (More ego maka shopping!)
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Of The Best Shopping outlets Na Europe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-shopping-outlets-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#onye okike okike #ejiji #mputa shopping